Inona avy ireo vokatry ny nafcillin? - BALLYA
Posted on March 7, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny Nafcillin?
Famaritana ny famolavolana
Vokatry ny Nafcillin
Nafcillin dia penicillin am-bava sy tsindrona izay simika simika for 6-aminopenicillin. Vovoka fotsy fotsy na mavo izy io, somary maimbo, mora levona anaty rano, chloroform ary etanol. Miorina amin'ny asidra sy penicillinase izy io. Amin'ny lafiny klinika, dia ampiasaina indrindra amin'ny aretina Staphylococcus mahazaka penicillin sy aretina hafa azo avy amin'ny bakteria.
Ny asany manohitra ny Staphylococcus aureus mahazaka zava-mahadomelina dia akaiky oxacillin, fa mahery noho ny methicillin. Izy io dia mandaitra indrindra amin'ny streptococcus hemolytic sy ny pneumococcus. Izy io dia tsy ampy ny fitrohana am-bava, ny fihenan'ny rà ambany ary ny fivoahan'ny urine kely. Ny haavon'ny rà amin'ny tsindrona intramuscular dia avo kokoa noho ny amin'ny fitantanana am-bava, nefa mbola ambany ihany. Ny fifantohana amin'ny fanafody nentim-paharazana sinoa amin'ny bile dia avo kokoa noho ny ra, ary ny 90% dia avoakan'ny bile. Ny tahan'ny fatorana proteinina plasma dia avo (87% eo ho eo).
2. Famaritana ny famolavolana
Misy endrika fatra maro sy famaritana ny nafcillin. Ny fiomanana ataon'ny mpanamboatra isan-karazany dia mety hisy fiantraikany amin'ny zava-mahadomelina samihafa sy ny fiatraikany ratsy noho ny fizotry ny famokarana samihafa. Azafady mba manatona dokotera raha mila safidy manokana ianao.
Tsindrona sodium (vovoka) Nafcillin: 1 g.
Kapsula sodium nafcillin: 0.25 grama.
Ity karazana ity dia tsy mahazaka asidra sy tsy mahazaka anzima penisilinina. Miorina amin'ny asidra izy io ary azo alaina am-bava na amin'ny fomba amam-panahy. Izy io dia miorina amin'ny penicillinase. Ny Nafcillin dia mahatohitra ny staphylococcus izay mamokatra penicillinase na mahatohitra Penisilin g noho ny antony hafa. Misy fiatraikany manokana amin'ny hemolytic streptococcus, viridis streptococcus, ary koa misy fiantraikany lehibe amin'ny bakteria sy bakteria amin'ny cocoly hemolytic, streptococcus viridis ary pneumococcus ary bakteria miabo tsara hafa.
Ny fatran'ny nafcillin faran'izay kely indrindra ho an'ny Staphylococcus aureus izay mora tohina sy mahatohitra ny penicillin dia 0.4 sy 0.48ug / ml. Ny fatran'ny tsindrona faran'izay kely indrindra ho an'ny pneumococcus, streptococcus viridis, meningococcus, ary gonococcus dia 0.02, 0.4, 0.8 ary 3.1ug / ml.
Taorian'ny tsindrona intramuscular an'ny 0.5 g ny nafcillin, ny fihenan'ny serum dia nahatratra tampon'isa 7.93ug / ml taorian'ny antsasak'adiny. Rehefa avy naka nafcillin 1g ho an'ny olona ara-dalàna dia mety hahatratra ny tampon'isa ao anatin'ny adiny 1 ny fatran'ny rà, manodidina ny 14.34ug / ml. Ny probenecid am-bava dia afaka mampiakatra avo roa heny ny fatran'ny rà. Ny antsasaky ny serum an'ny nafcillin dia mihoatra ny 1.5 ora.
Nafcillin dia voaely betsaka, ary ny fifantohana zava-mahadomelina mahomby dia mifantoka ao amin'ny gallbladder, voa, havokavoka, fo, tsinay sy aty; ny fifantohana avo indrindra dia ao amin'ny tsinay kely, aty ary ny voa;
Aorian'ny tsindrona intramuskular an'ny 1.5g nafcillin, ao amin'ny tsiranoka synovial amin'ny vatan'ny lohalika mirehitra, ny fifantohana ara-pahasalamana dia azo atao amin'ny mpanelanelana; ny fifantohana avo lenta dia voatazona ao amin'ny bile. Tao anatin'ny 4 ora taorian'ny tsindrona intravenous dia niseho tao amin'ny bile ny 93% amin'ny fatra. Nafcillin dia manana reabsorption tsara ao amin'ny tsinay.
Ny Nafcillin dia avoakan'ny bile sy ny urine. Rehefa afaka 6 ora ny tsindrona intramuscular sy ny fitantanana am-bava ny Nafcillin, 14% sy 7% ny fatra dia navoaka tao amin'ny urine, 18-19% dia navoaka tamin'ny urine tamin'ny andro fahatelo, ary ny urine tamin'ny andro fahavalo 21% ary 19.4% an'ny ny totalin'ny vola navoaka tao anaty tain-drendrika; na inona na inona fanindronana am-bava na intramuscular, ao anatin'ny 12 ora, 10% ny fatra dia avoaka ao anaty ny diky.
Amin'ny andro fahavalo, ny totalin'ny vola mivoaka ao amin'ny diky dia mahatratra hatrany amin'ny 50%, ny fivoahana urinary miadana ary ny fivoahan'ny bile maharitra dia mety ho antony lehibe mahatonga ny nafcillin hitazona fifantohana bakteria maharitra sy mahomby. Ny Nafcillin dia manana tahan'ny famehezana proteinina serum avo, saingy tsy misy fiatraikany firy amin'ny vokatry ny bakteria.
Penicillin semi-synthetic mahazaka asidra sy mahatohitra anzima. Miorina amin'ny asidra izy io ary azo omena am-bava na amin'ny fiterahana. Izy io koa dia miorina amin'ny penicillinase. Nafcillin dia misy fiatraikany manokana amin'ny Staphylococcus mahatohitra ny penicillin g, hemolytic streptococcus ary viridis streptococcus. Izy io dia misy fiantraikany lehibe amin'ny bakteria sy bakteria amin'ny bakteria Gram-positive toy ny hemolytic streptococcus, viridis streptococcus ary pneumococcus.
Nafcillin dia mety amin'ny aretina Staphylococcus mahazaka penicillin ary aretina hafa azo avy amin'ny bakteria, toy ny: sepsis, bacteremia, endocarditis, empyema, abscess amin'ny aty, pnemonia, osteomyelitis, meningitis, peritonitis, cellulitis, fever fever, tonsillitis, pharyngitis, otitis media , erysipelas, aretina urinary tract, bronchitis, Tetanus, gangrene gazy, anthrax, diphtheria, gonorrhea, arthritis gonococcal ary ophthalmia.
Nafcillin dia penicillin semi-synthetic mahatohitra lactamase beta ary asidra. Izy io dia miorina amin'ny penicillinase ary misy fiantraikany amin'ny bakteria sy bakteria. Mety amin'ny fitsaboana aretina staphylococcal mahazaka penicillin sy aretina hafa amin'ny bakteria mora tohina amin'ny penicillin, toy ny sepsis, endocarditis, empyema, abscess amin'ny aty, pnemonia, osteomyelitis, sns. 85% mahery noho ny fitsaboana aretina azo avy amin'ny zava-mahadomelina Staphylococcus aureus.
Tao anatin'izay taona faramparany, ny aretim-bavony vokatry ny Staphylococcus aureus mahazaka zava-mahadomelina dia tsy olana amin'ny tsilo izay tsy maintsy atrehin'ireo mpitsabo matetika, fa mitera-doza koa amin'ny fahasalaman'ny olombelona rehetra. Vancomycine, fantatra amin'ny anarana hoe "tsipika farany farany" amin'ny areti-mifindra amin'ny klinika, dia fitsaboana ara-pahasalamana nalefa hatrany noho ny aretina gram-positive. Na izany aza, natokana tany amin'ny firenena maro ny Staphylococcus aureus mahazaka vancomycin, izay zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny fitsaboana vaovao manohitra ny aretina, noho izany dia nisy fangatahana nilaina ·
Tamin'ny voalohany, ny fahatsapana ny Staphylococcus aureus amin'ny penicillin dia mihoatra ny 90%, noho izany ny ankamaroan'ny antibiotika dia nitana toerana tsara teo amin'ny fitsaboana ny aretina vokatry ny Staphylococcus aureus. Na izany aza, tamin'ny fampiasana antibiotika be dia be, nipoitra koa ny Staphylococcus aureus mahazaka penicillin, ary Staphylococcus aureus mahazaka antibiotika hafa, toy ny tetracycline, erythromycine, sns, dia hita ihany koa. Noho izany, nandritra ny fotoana ela, ny fitsaboana ny aretina Staphylococcus aureus maharitra dia tsy nahatratra ny vokatra andrasana. Ny fiovan'ny zava-mahadomelina mikraoba dia ny fiovan'ny rafitra eo amin'ny toerana manokana misy molekiola ADN, ary tsy misy ifandraisany amin'ny fisian'ny zava-mahadomelina. Ny fisian'ny zava-mahadomelina iray dia fomba iray fotsiny hanokanana ireo aretina tsy mahazaka zava-mahadomelina sasany.
Syphilis dia aretina mamindra maharitra vokatry ny Treponema pallidum, izay aretina azo avy amin'ny firaisana. Amin'ny dingana voalohany dia aretina sy areti-mifindra izy io, izay mety hanafika ny taova sy ny sela mandritra ny fizotran'ny fampandrosoana ary miteraka soritr'aretina isan-karazany. Indraindray izy io dia azo ajanona mandritra ny taona maro na mandritra ny androm-piainana tsy misy fisehoana aza, ary miadana ny fizotran'ny aretina.
Ny aretina dia ampitaina amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny fitondran-tena ara-nofo, ary azo ampitaina amin'ny taranaka mandimby koa amin'ny alàlan'ny placenta. Noho ny fisehoan'ny syphilis isan-karazany, ny ankamaroany dia sarotra amin'ny aretina mikraoba. Ka tokony hofidina ireo antibiotika mitsabo azy roa. Amin'izao fotoana izao dia voaporofo izany sodium sodium nafcillin izay spektrum malalaka, azo antoka, tsy mahazaka anzima ary tsy mahazaka asidra penicillin fahatelo dia misy fiatraikany manokana amin'ny sifilis.
Am-bava: 0.25 ～ 1g / fotoana, 4-6 isan'andro / isan'andro, ento amin'ny vavony foana.
Fanindronana intramuskular na intravenous: 4-6 / andro, mizara in-4, levona amin'ny rano ho an'ny tsindrona na masira isotonic.
Fampiharana eo an-toerana: 0.2% ka hatramin'ny 1% ny vahaolana aqueous azo ampiasaina amin'ny ratra sy sofina.
Fanafody ho an'ny vehivavy bevohoka sy vehivavy mampinono: Tsy ampy ny fikarohana ampy momba ny vokatry ny nafcillin amin'ny vehivavy bevohoka, noho izany ny vehivavy bevohoka dia tokony hampiasa afa-tsy nafcillin rehefa tena ilaina izany. Ny nafcillin kely dia azo afenina amin'ny rononon-dreny, ary ny vehivavy mampinono dia tokony hijanona tsy mampinono rehefa mihinana zava-mahadomelina.
Fanafody zaza: ny zaza vao teraka, indrindra ny zazakely vao teraka, dia tokony hitandrina izany.
Vokatry ny Nafcillin-effects
Ny fitantanana am-bava dia mety miteraka fihetseham-po amin'ny vavony: maloiloy, mandoa, tsy fahazotoan-komana, fivalanan'ny kibo, fivalanana. Ireo izay manana allergie penicillin dia tsy tokony hampiasa izany. Ny tranga sasany dia voan'ny leukopenia, aretin-koditra, tazo rongony, aretin'andoha ary aretin-kibo. Ny fatra lehibe dia mety miteraka fiatraikany amin'ny neurolojia, toy ny fisafotofotoana, fikorontanana ary fikorontanana. Ny zaza dia afaka mahazo tsiro vahiny ao am-bava (toy ny tsiro metaly). Ny nôrosis amin'ny hoditra sy ny fahasimban'ny tavy eo an-toerana dia mety hitranga aorian'ny tsindrona intravenous. Izy io dia mety hiteraka fahasimban'ny voa, nephritis interstitial faharoa, mety hanimba ny aty.
Fihetseham-po amin'ny alikaola: Mety hiteraka hatairana na famonoana olona izany. Raha vantany vao miseho izany dia tsy maintsy avotana eo noho eo. Ny fanehoan-kevitra mahazaka hafa dia misy anemia hemolytic (allergy type karazana), maimaika ny zava-mahadomelina, dermatitis mifindra, nephritis interstitial, fanafihana asma sns.
Ny nafcillin intravenous dia mety hiteraka agranulositosis tsy fahita firy.
Vitsy ny marary marary rà mandriaka aorian'ny nanomezana nafcillin am-patiny. Ny fiatraikany ratsy toy izany dia mety vokatry ny tsy fiasan'ny trombetra.
Ny fanafody fatra avo lenta (≥12 grama isan'andro) dia mety hiteraka tsy fahampian'ny aty na cholestasis toy ny hepatita aorian'ny fampiatoana ny zava-mahadomelina.
Indraindray, dia mety hiteraka fiakarana tsy mitongilana sy tsy mitongilana ao anaty serum AKP, AST, ary ALT mifantoka.
Izy io dia mety hiteraka phlebitis na thrombophlebitis.
Ny fantsaky ny Nafcillin dia mivoaka ivelan'ny lalan-dra ary mety hiteraka fahasosorana simika mahery amin'ny sela manodidina, izay mitarika ho amin'ny fery amin'ny hozatra sy ny nosy.
Valan'aretina roa: Staphylococcus aureus mahazaka Penisilinina, bacilli grama ratsy na albicans Candida dia mety hitranga mandritra ny fitsaboana. Ny firoboroboan'ny Candida dia mety hahatonga ny lela hosodoko ho mainty na ho mainty mihitsy aza.
Ny fanoherana ny herxheimer sy ny fifanoherana: hita amin'ny sifilis, leptospirosis na aretina hafa mifindra.
Nafcillin dia fanafody fanafody ary tsy maintsy omen'ny dokotera mifototra amin'ny toe-javatra misy anao. Ny fitantanan-tena dia mety hampitombo ny risika: ny fandaniam-poana ny loharanon'ny zava-mahadomelina, ny fanemorana ny aretina, ny fitomboan'ny fanoherana ary ny fiatraikany amin'ny zava-mahadomelina mahatsiravina.
Araka ny fenitra avoakan'ny Etazonia Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA), ny nafcillin dia an'ny ambaratonga B mandritra ny fitondrana vohoka: ny fanadihadiana momba ny fananahana biby dia tsy nampiseho loza mety hitranga amin'ny zaza ao am-bohoka, fa tsy nisy fanadihadiana sahaza an'ireo vondrona mifehy natao tamin'ny vehivavy bevohoka.
Fihetseham-po amin'ny alikaola, fisaleboleboana, fandoavana, fihenan'ny kibo, transaminase avo lenta, fahasimban'ny fiasan'ny voa, sns.; fanaintainana intramuscular; tsindrona intravenous mety hiteraka phlebitis. Ilaina ny fitsapana alika alohan'ny hampiasana azy.
Very fahazotoan-komana, tsiro ratsy ao am-bava, maloiloy, mivonto sns.
Indraindray ny alanine aminotransferase dia mety hitombo vonjimaika.
Manaova fitsapana alergiana alohan'ny hampiasana azy.
Raha misy ny tsy fahaizan'ny anaphylactic dia tokony hatsahatra eo noho eo ny zava-mahadomelina, ary 0.5-1 ka hatramin'ny XNUMX mg epinefrinitra dia tokony atsofoka ao anaty lava-tanana na intramuscularly haingana araka izay tratra. Ny marary voan'ny aretim-po dia azo tsindrona amin'ny intracardiac; omeo oksizena miaraka amin'izay, miaraka amin'ny antihistamines sy kortikosteroid.
Raha mampiasa nafcillin indray ianao 48 ora taty aoriana dia tokony hanao fitsapana hoditra indray; raha mampiasa andiany hafa amin'ny penisilinina na mpanamboatra penicillins samihafa 24 ora aorian'ny fijanonan'ny zava-mahadomelina, dia tokony hanao fitsapana amin'ny hoditra koa ianao.
Raha ratsy ny valin'ny fitsapana ny hoditra, dia mety hitranga ny fihenan-tsofina na ny fihenan'ny alika, koa aza mitandrina.
Tandremo mba hisorohana ny fihenan'ny mahazaka aretina. Ny marary tsy mahazaka penicillin iray dia mety tsy mahazaka penicillins hafa, penicillamine na cephalosporins.
Ny penisilin dia azo esorina amin'ny alàlan'ny rononon-dreny, ary ny vehivavy mampinono dia tokony hijanona tsy mampinono rehefa mihinana zava-mahadomelina.
Ny nafcillin dia tsy azo esorina amin'ny hemodialisis.
Nafcillin dia mifanohitra amin'ny aminoglycosides, norepinephrine, meta-hydroxyamine, phenobarbital, vondrona vitamin B, vitamina C ary fanafody hafa, noho izany dia tsy mety amin'ny fampidirana azy amin'ny tavoahangy iray ihany.
Probenecid dia afaka mampihena ny tsiranoka renal naphthacillin ary manalava ny antsasaky ny fiainana ny nafcillin.
Ascilin ary zava-mahadomelina sulfa mampihena ny fitrohana ny nafcillin ao amin'ny làlam-pandevonan-kanina, ary afaka manakana ny fatoran'ny nafcillin sy ny proteinina serum, ary mampitombo ny fatran'ny ra nafcillin.
Nafcillin, penicillin semi-synthetic, dia misy fiantraikany manokana amin'ny Staphylococcus izay mahazaka Penicillium g. Ny hetsika Staphylococcus aureus fanoherana ny fanoherana dia manakaiky ny oxacillin.
Nafcillin an'ny lactams beta. BALLYA manome a fitsapana betalactam mba hilazana aminao raha misy ambina lactams beta amin'ny vokatra vita amin'ny ronono izayhaninao isan'andro.
MedlinePlus: Tsindrona Nafcillin